Erdogan oo ku gacan seeray baaqyada caalamka - Awdinle Online
Home News Erdogan oo ku gacan seeray baaqyada caalamka
Erdogan oo ku gacan seeray baaqyada caalamka
Turkey ayaa ku gacan seertay cadaadiska caalamiga ah ee looga dalbanayo inay joojiso hawl-galka militari ee ka dhanka ah Kurdiyiinta ee ciidamadeeda ay ka wadaan Waqooyiga Syria.
Dagaal xooggan ayaa maanta ka socda magaalada xuduudda Syria ku taalla ee Ras a-Ain, ayada oo ciidamada Kurdiyiinta ay isku dayayaan inay sii haystaan magaalada, iskana caabiyaan ciidamada kale ee Syria ee Turkiga uu taageero.
Weriye ka tirsan AFP ayaa sheegay in dagaalka magaalada uu weli socdo, inkasta oo Ankara ay dhowr mar sheegtay inay gacanta ku dhigtay magaalada.
Tan iyo markii dagaalka uu billowda 9-kii October, ciidamada Turkiga uu taageerayo ayaa qabsaday in ka badan 100 km oo dhulka xuduudda ah, hase yeeshee Ras al-Ain iyo Siri Kani ayaan weli gacanta usoo gelin.
Madaxweynaha Turkiga Reccep Tayyip Erdogan ayaa weriyayaasha u sheegay “waxay na lee yihiin ‘xabad-joojin ku dhowaaqa’. Weligeen xabad-joojin ku dhowaaqi mayno.”
“Insha Allah, waxaan dhowaan gacanta ku dhigi doonnaa dhul ku teedsan Manbij illaa xuduudeenna Ciraq,” ayuu yir Erdogan.
Hawl-galkan ayaa taageero ballaaran ka haysta gudaha Turkiga, halkaasi oo dagaal jabhadeyn ah oo sanado badan ay wadeen Kurdiyiinta dalkaas ay ku dhinteen kumanaan qof.
Previous articleDakhliga shirkadda Huawei oo kordhay ku 25%
Next articleBaydhabo Oo ka maqan isgaarsinta